I-YY 0469-2004 iimfuno zobugcisa zeemaski zokuhlinzwa ezisetyenziselwa ezonyango zakhutshwa ngurhulumente wamachiza kunye nolawulo lokutya njengenqanaba lomzi-mveliso wamachiza kwaye laphunyezwa nge-1 kaJanuwari ka-2005. Lo mgangatho ucacisa iimfuno zobugcisa, iindlela zokuvavanya, ukumakisha kunye nemiyalelo yokusetyenziswa, ukupakisha, ukuhambisa kunye nokugcina iimaski zokuhlinzwa. Umgangatho umisela ukuba ukwenziwa kweefasilisi kwimaski akufuneki kube ngaphantsi kwe-95%.
I-GB / T ye-32610 ukuya ku-2006 yokuchazwa kobuchwephesha bemaski ekhuselayo yemihla ngemihla, ekhutshwa ngumphathi wangaphambili we-aqsiq kunye ne-China, ngumgangatho wokuqala kazwelonke wamaski okhuselo e-China kwaye waphunyezwa nge-1 kaNovemba, 2016. Lo mgangatho ubandakanya iimfuno ze Imaski isixhobo, ukwakhiwa, iilebheli, imbonakalo, njl. Izalathiso eziphambili zibandakanya ii-indexes zokusebenza njengokusebenza kweefetter filtration, ukungqinisisa kunye nokukhuthaza ukungqinisisa, kunye nokuqina.
Umgangatho ufuna ukuba iimaski kufuneka zikwazi ukukhusela ngokukhuselekileyo umlomo kunye neempumlo, kwaye akufuneki zibe ne-angle ebukhali okanye umphetho onokuthi uchukumiseke. Yenza imigaqo eneenkcukacha kwi-formaldehyde, iidayi, iintsholongwane kunye nezinye izinto ezinokubangela ingozi emzimbeni womntu, ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko loluntu xa unxibe imaski ekhuselayo.